AKA AKPARALA ‘DIBIA OYIBO’ OSO CHI EGBU – hoo!haa!!
Aka ndi uwe ojii akparala otu nwoke kpọrọ onwe ya dibia oyibo na Legọs
Nwokea dị afọ iri atọ na itolu ka-ekwuru na-onwere “ụlọ ọgwụ” na Mushin dị na steeti Lagọs.
Ekwukwara na nwokea arụọla ọrụ ahụ-ike nke ijabua ihe dika afọ anọ. Tupu aka kpara ya, ọ na-elele ndi ọya ahụ ma na-edeputarakwara ha ọgwụ. Aha nwokea bụ Abdulrahman Mohammed.
Mohammed bụ onye nke ekwuru na-ọ gbahapụrụ agụm akwụkwọ mgbe ọ gụdebere na nkeji nke anọ n’ụlọ akwụkwọ nta, bịara debe ụlọ ahụ ike n’Idi-Araba dị na Mushin Legọs, bụ ebe ọ nọrọ na-agba ndi mmadụ ọgwụ ụdị nke esi n’akwara agba, ọ na-edepụtakwara ndi mmadụ ọgwụ di iche iche ha ga-azụrụ maka ahụ ike ha dika ndi dibia oyibo si eme.
Mgbe ọ na-egosi ndi mmadụ nwokea, ka onye ji ọkwa kọmishọna ndi uwe ojii nke steeti Legọs bụ Edgal Imohimi kwuru na ihe dika elekere iri na abụọ nke ụtụtụ, n’abali iri na anọ nke ọnwa anọ bụ Epurel, ka ndi nnyocha n’ọrụ uwe ojii ngalaba nke Area D Command na Mushin, nwụchiri nwokea bụ nke ọ sịrị na-amụrụ na Gamboru Ngala di na steeti Borno, ebe ọ na-arụ ọrụ dika dibia oyibo. Ọ sịrị na nwokea gụdebere akwụkwọ na nkeji nke anọ n’ụlọ akwụkwọ nta, ma kwukwarị, na enweghị asambodo gosiri na nkea bụ eziokwu.
Ọ sịrị na nwokea bụ Mohammed na-ele ndi mmadụ ahụ, agba ha ọgwụ nke ana-agba n’akwara tinyekwara iwere ọbara na mamịrị ha dịka ihe eji elele ahụ.
Nwokea ana-enyo enyo jiri ọnụ ya kwue na ya siri n’ahịa Idumọta azụta ọgwụ ya ji arụ ọrụ.
Akọrọ ngwa ọrụ enwetara n’aka ya dịka ihe akaebe gụnyere, igwe eji elele ọbara mgbali elu, nke ọgba wara-wara na nke pịkpọm-pịkpọm. Ihe ndi ọzọ gụnyere ntụtụ eji agba ọgwụ nakwa akpa mmiri na-enye ume (drip) tinyekwara ihe ndi ọzọ.
Aga-akpụpụ nwokea ụlọ ikpe ozigbo emechara nnyocha gbasara ya nke ọma.
N’okwu ya,Mohammed kwuru na ya anaghị arụ ọrụ dịka dibia oyibo kama na ya na-ere ọgwụ nke bekee kpọrọ chemist.
Previous Post: TỤFỊAKWA!!! ỌKARA MMADỤ ỌKARA ANỤMANỤ NA-AKPA IKE NA MBA AJENTINA
Next Post: NNUKWU ỌKWA DỊ MKPA MAKA NDỤ GỊ!!!
IBB kwuru okwu ọma, hoo!haa!!